Ngabe Ukumaketha Kuguquka Ngempela Okukhulu? | Martech Zone
Le infographic ihlanganisa imiphumela emihle evela ku I-Accenture's CMO Insights yango-2014, kepha ngiyesaba ukuthi ivulwa ngesihloko esimangazayo esimele kabi. Lithi:
Ama-78% wabaphenduli Bavuma ukuthi ukumaketha kulindeleke ukuthi kwenziwe ushintsho olukhulu eminyakeni emihlanu ezayo.
Ngenhlonipho, angivumelani nalokhu. Marketing kuyavela futhi idigital iphambili kumasu amaningi. Izabelomali ziyashintsha, amasu ezenhlalo nokuqukethwe anyuke kakhulu, futhi amathuluzi aya ngokuthuthuka futhi athengeka kakhulu kumabhizinisi anezabelomali ezincane. Kepha ukumaketha - ukutholwa, ukugcinwa kanye ne-upsell zisabucayi njengakuqala.
Ngingancamela isitatimende esinesibindi se-infographic esifana nesika-Accenture
Ama-CMO: Isikhathi soguquko lwedijithali noma ubungozi ukushiywa eceleni
Ukumaketha sekuguqukile… kepha abathengisi abaningi, ama-ejensi wokumaketha, namasu wokumaketha awakaguquki nezikhathi. Vele, lokho kuhle kuma-ejensi emidiya amasha asiza ngemali efanele laba baholi abanamasu ukuletha amasu abo phambili. Kepha akunabuhlungu. Izangoma zendabuko ziyaqhubeka nokuzama ukuyala isabelomali sonke ngenkathi abezindaba abasha bezishadele futhi bekhula.
Okuthile okufanele kunikeze, kungekudala, futhi ngikholwa ukuthi ikhefu lizoba kuzindlela zesintu ezifana nokuphrinta nokusakaza. Uma ungumthengisi olwa naleyo nqubekela phambili, ungahle uthande ukukhulisa ububanzi bamasu akho futhi uthole usizo ukuqala ushintsho kwimidiya yedijithali.
Tags: 2014centure cmo isifundocmo isifundoUcwaningo lwe-cmoinfographic